ဉာဏ (စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ) - ဝီကီပီးဒီးယား
↑ မောင်သုတ။ "ဦးဉာဏ (၁၂၆၄ - ၁၃၃၁)"။ in မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) (ed.)။ စာဆိုတော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (ပဉ္စမအကြိမ် ed.)။ ရာပြည့် စာအုပ်တိုက်။ Text "date ၁၊ ဩဂုတ်၊ ၂ဝဝ၂" ignored (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဉာဏ_(စာရေးဆရာ_ဒါရိုက်တာ)&oldid=628179" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၃:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။